Qardho:-Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Sh Maxamed Faroole ayaa maanta waxaa uu xariga ka jarey xabsiga weyn ee magaaalada Qardho ee xarunta gobalka Karkaar kaas oo uu dhismihiisu uu socday mudo ku dhow afar sanno.
Xaflada furitaanka Xabsiga weyn ee magaalada Qardho ayaa waxaa madaxweynaha ku weheliyey wasiiro ka tirsan xukuumada Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka Amniga Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan ,wasiir ku xigeenka Arrimaha gudaha Cali Yuusuf Cali Xoosh ,taliyaha ciidanka Daraawiisha Puntland Gen.Siciid Dheere ,Taliyaha ciidanka Asluubta Gen.Cali Nuur Cumar oo saraakiil iyo masuuliinta gobalka Karkaar.
Waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa furitaanka xabsiga weyn ee magaalada Qardho Nabadoono iyo waxgarad ka tirsan degmada Qardho Xabsigan ayaa waxaa maalgaliyey Hay,da UNDP wuxuuna ka kooban yahay sadexqeybood oo midkiiba 13qol yahay waxaana qolkiiba lagu xiri karaa 8qof .
Taliyaha Ciidanka Asluubta Puntland Gen.Cali Nuur Cumar ayaa ka hadlay xaflada waxaana uu balan qaaday in dhaqan celin ay u sameydoonaan dadka lagu soo xiro xabsiga ayna ilaalin doonaan xuquuqdooda.
Madaxa UNDP Puntland Mr.Kean Tran oo ay hayadiisu dhistay xabsigan ayaa goobta ka hadlay waxaa uu balan qaaday in ay sii wadi doonaan sii wadi doonaan tababaro iyo siminaaro ay siiyaan ciidanka Asluubta ee Puntland.